Banyere Anyị - Simatech Inc
Silk fibroin bụ a ndammana ewepụtara protein polima dịpụrụ adịpụ site na ụlọ silkworm cocoons na nwere ihe pụrụ iche Njirimara na izute chọrọ maka anụ ahụ engineering na ọgwụ nnyefe ngwa. The pụrụ iche sekọndrị na crystal owuwu nke silk biomaterials inye ha na-achọsi ike biodegradability, biocompatibility, biosafety, stabilization na tunable ntọhapụ nke ndị webatara ọgwụ ọjọọ, na ihe niile na-okenye, ihere nhazi nhọrọ. Silk agịga eri e n'enweghị tinye n'ọrụ na clinics ruo ọtụtụ afọ, na ngwaọrụ ahụike mere si solubilized silk fibroin nakwa na e mma site US FDA na nso nso. Silk fibroin dị ka ihe abụrụ ere ure ihe onwunwe na-akwanyere ùgwù atụmatụ na-adọta ndị ọzọ na ndị ọzọ ntị si academia institutes nakwa dị ka ọgwụ na ahụ ike na ngwaọrụ na-emepụta ọgwụ ọrụ.
Simatech Inc. bụ a biotech ụlọ ọrụ na-elekwasị anya n'ichepụta silk fibroin biomaterials na-emepe emepe ala-nke-na-art usoro maka a dịgasị iche iche nke Biomedical ngwa, gụnyere orthopedic ịwa ahụ, plastic ịwa ahụ, 3D bio-ebi akwụkwọ, ọgwụ nnyefe, na ihe ntecha. The ụlọ ọrụ e guzobere na 2013 na-emi odude ke mmepụta ogige nke Suzhou, China. Ekele ya-eto eto na-eto ngwa ngwa nnyocha na mmepe otu (karịa 80% ukwu na PhD larịị ọkà mmụta sayensị), Simatech mere ka ezigbo ọganihu ndị a afọ ole na ole, na mere nso collaborative mmekọrịta anụ ụlọ na mba ndị mmekọ. Simatech ga-anọgide na-eji silk biomaterial dị ka ngwá ọrụ iji merie ọrịa ma melite ogo nke ndụ.
Technology Na Njikọ Aka
Simatech Inc. bụ njikere inye high quality, ọkọlọtọ ma ọ bụ ahaziri silk fibroin biomaterial ngwaahịa nakwa dị ka metụtara ọrụ na teknuzu akwado maka dị iche iche ahịa, gụnyere ndị nnyocha na ụmụ akwụkwọ na mahadum na nnyocha institutes, na ndị ọkà mmụta sayensị na ụlọ ọrụ. Simatech dị njikere imekota na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eme nnyocha institutes ịzụlite ọhụrụ ngwaọrụ ahụike, ọgwụ nnyefe usoro, na-achọpụta ọrịa usoro ma ọ bụ ndị ọzọ na-abụghị ọgwụ ngwaahịa site n'ikere òkè ya ụlọ ọrụ na nka on silk biomaterials. Biko kpọtụrụ anyị na gị aro / comments enweghị ihe ọ bụla ala azụ.
Anyị mgbe e etinye onwe anyị na-enye elu àgwà silk fibroin dabeere ngwaahịa maka ndị ahịa, na-elekwasị anya na mmepe na ngwa nke nkà na ụzụ ọhụrụ na anyị na-akwado parteners.